Itoophiyaa fi Sudaan: 'Daangaa seenanii akka qubatan, darbees kan keenya akka jedhan wanti haasa'ame hin jiru' - BBC News Afaan Oromoo
Itoophiyaa fi Sudaan: 'Daangaa seenanii akka qubatan, darbees kan keenya akka jedhan wanti haasa'ame hin jiru'
20 Amajjii 2021
Madda suuraa, Ministeera Haajaa Alaa
"Iddoo kamiyyuu yaa ta'u, [Sudaan] lafa Sadaasa 06 as qabatan yaa gadhiisan," jedhan dubbi himaan Ministeera Dhimma Alaa Ambaasaaddar Diinaa Mufti.
Roobii sa'aa booda dhimmoota waytaawaa irratti miidiyaaleef ibsa kan kennan dubbi himaan Ministeera Dhimma Alaa Itoophiyaa Ambaasaaddar Diinaa Muftii, Sudaan lafa naannoo daangaa 'seeraan ala qabatteerti' jedhan akka gadhiistu gaafatan.
Biyyattiin lafa Sadaasa 06 bara 2020 as qabatte haala kamiinuu kooti jechuu akka hin dandeenyes himaniiru.
Muddamni daangaa Itoophiyaafi Sudaan irratti erga uumamee kan bubbule yemmuu ta'u, mootummaan Itoophiyaa loltootni Sudaan lafa qonnaan qonnaan bultoonni Itoophiyaa misoomsaa turan to'achuu isaanii komataa tureera.
Gama biraatin Ministirri Beeksisaa Sudaan, waraanni biyya isaanii iddoowwan lafa keenya jedhan keessaa harka caalu to'achuufi kun ammoo tarkaanfii duuba hin deebiyamne ta'uu torban muraasa dura madda oduu Rooyitarsitti dubbatanii turan.
'Daangaa duraaniitti deebinee rakkoo jiru nagaan furuu qabna'
'Waraanni Sudaan daangaa Itoophiyaa keessatti sochiin taasisu dabalaa jira'
Kana malees tibbana miidiyaaleen biyya Sudaan pirezidaantii mana maree Sudaan Abdul Fattaah Al-Buhraan eerun, loltootni Sudaan waliigaltee Mummee Ministiraa Abiy Ahimad walin taasifame bu'uura godhachuun gara daangaatti bobba'uu isaanii himaa turan.
Haa ta'u malee Ambaassaaddar Diinaa Muftii "wayita humni keenya naannoo Kaaba biyattiitti olaantummaa seeraa kabachiisuuf bobba'etti, naannoo daangaatti haaloota biyyoota lamaanif hin mijannee akka hin uumamnef, mootummaa Sudaanif imaanaan kennamee ture.
Haa ta'u malee gara daangaa seenanii akka qubatan darbees kan keenya akka jedhanif wanti haasa'ame hin jiru," jedhan.
Kana malees "humnootiin badii gara daangaa keessanii akka hin seenne jechuun, koottaati daangaa keenya eegaa jechuu miti" kan jedhan Ambaassaadar Diinaan "gara biyya keenyaa seenaatii lafa qabadhaatii nuuf eegaa wanti jedhu jiraachuu hin danda'u. Hooggansa akkana jedhus hin qabnu" jedhan.
Haasaan eegumsa naannoo daangaa amantaa Itoophiyaan Sudaanirraa qabdu bu'uura godhachuun aangawoota Sudaan waliin kan mari'atamee ture ta'uu kan himan Ambaassaadarichi "gama Itoophiyaatin tilmaamni wanta akkanaa ni raawwatu jedhu gonkumaa hin jiru ture. Kan ilaalle garuu faallaa isaati," jechuun gochaa aangawoota Sudaan komataniiru.
Haalduree tokko qofa…
Muddamni naannoo daangaa Itoophiyaafi Sudaanitti uumame akka furamuuf haaldureen Itoophiyaa tokko qofa ta'uu kan himan Ambaasaaddar Diinaan "ejjennoon Itoophiyaa gara iddoo duraan turtanitti deebi'aatii mari'achuu dandeenya kan jedhudha" jedhan.
Kana malees dhimmi daangaa kun kanaan dura koreen hundaa'ee irratti mari'atamaa akka ture himuun, marichi iddoo itti dhaabbatee akka itti fufu gaafataniiru.
Itoophiyaafi Sudaan akkamiin daangaarratti wal dhaban?
"Nuyi mari'achuuf qophiidha. Haaldureen jiru tokko qofa. Innis iddoo duraan turtanitti deebi'aatii yaa mari'annu kan jedhudha. Yoo ta'uu baate garuu wal harkaa fuudhuu ta'uu waan danda'uf innimmoo gaarii hin ta'u," jedhan.
Loltootni Sudaan gara daangaa Itoophiyaa seenuun lafa qabachuun isaanii faayidaa uummata Sudaan kan miidhu ta'uu himuunis, gochaan loltoota Sudaan kun fedhii uummata Sudaan akka hin taane dubbatan.
Walitti bu'insi biyyoota lamaan gidduutti uumamu biyyoota lamaan kan miidhu ta'uusaafi gareelen walitti bu'iinsa kanarraa fayyadamuu barbaadan akka jiranis dubbatan.
Kana malees tarkaanfiin loltoota Sudaan kun gocha gareewwan tokko tokko Sudaan keessatti beekamtii hin malle argachuuf raawwataa jiran ta'uu dubbi himaan Ministeera Dhimma Alaa Ambaasaaddar Diinaa Muftii himaniiru.
Gama biraatiin biyyoota Itoophiyaafi Sudaan araarsuuf fedhii agarsiisan akka galateeffatan kan himan Ambaasaaddarichi, biyyoonni lamaan mari'achuuf yoo fedhii qabaatan jaarsummaan qaama sadaffaa akka hin barbaachisne himan.
Rakkoo Daangaa Itoophiyaafi Sudaan: 'Waraanni Sudaan daangaa Itoophiyaa keessatti sochiin taasisu dabalaa jira'-Itoophiyaa
12 Amajjii 2021
Daangaa Itoophiyaafi Sudaan: Muddama daangaa Itoophiyaafi Sudaan irratti dabalaa dhufe
Xiinxala: Itoophiyaafi Sudaan akkamiin daangaa bakka al-Fashagaa jedhamurratti wal dhaban?
'Maashinni hojjechuu didee waan na rakkiseef maaliifan ofii kiyya hin hojjedhu jedheen eegale'
Hongee waggaa tokko booda Paarkii Booranaatti lafti jiidhe
Kooriyaan Kaabaa sha'iifi soogiddaan COVID ofirraa ittisaa jirti
Pirezidantiin Somaaliyaa haaraa Hasan Sheek Mohaammud eenyu?
17 Caamsaa 2022
Yeroo dhuma kan haaromfame: 13 Sadaasa 2019
Umurii kamitti wal qunnamtii saalaa jalqabuutu gaariidha?
Yeroo dhuma kan haaromfame: 15 Amajjii 2019
Mallattoowan torba akka bilbilli keessan butaman mul'isan
Yeroo dhuma kan haaromfame: 2 Amajjii 2019
Yeroo dhuma kan haaromfame: 15 Onkololeessa 2018
Itoophiyaan buqqaatota hedduu qabaachuun addunyaarraa tokkoffaa taate - Gabaasa
'Aanga'oonni ABO seeraan ala hidhamanii jiran atattamaan gadhiifamuu qabu' -KMNI
Abdii Raggaasaa, qondaala tikaa Dargii irraa hanga ajajaa olaanaa WBO
Yeroo dhuma kan haaromfame: 17 Bitooteessa 2020
'Intala kiyya yunifoormii uffatte mana barnootaa duratti ijjeesan'
Mana barnootaa “iccitii” shamarranii Afgaan keessaa beektuu?